VAOVAO SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA SAINT BERNER - ALIKA
Vaovao sy sary momba ny fiompiana alika Saint Berner
Alika any an-tendrombohitra Saint Bernard / Bernese Mountain Dog mifangaro
I Henry sy i Soda dia Saint Bernese ( St. Bernard / Alika Mountain Bernese ) avy amin'ilay fako naseho teto ihany. Tamin'ny herintaona sy roa volana dia nilanja 100 kilao izy roa. Ireo alika ireo dia tena malefaka, be fitiavana ary miaro. Ny rain'izy ireo dia Saint Bernard 120-pounds ary ny reniny dia alika Mountain Bernese 60-pounds. Nisy alikakely 4 tao amin'ny fako. Ireo alika kely efatra dia mitovy fandokoana araka ny hitanao ao amin'i Henry sy Soda ny roa amin'ireo efatra dia misy mony amin'ny orony sy ny masony maizina kokoa. Henry sy Soda dia ohatra tsirairay avy.
sary an'ny shar pei alika
Ny Santa Bernese dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Saint Bernard ary ny Alika Mountain Bernese . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Soda the Saint Berner amin'ny 3 volana
Henry sy Soda, St. Bernard / Bernese Mountain Dog mifangaro alika (Saint Berners) aseho eto amin'ny 6 volana.
inona no nohanin'ireo vorontsiloza?
Henry sy Soda, hybrida Saint Dog / Saintese Bernard Mountain (Saint Berners) efa lehibe— 'Izaho sy ny vadiko dia' olona saka 'taloha ary ireo no alika voalohany. Nahagaga ny traikefa ary nanova ny fiainantsika ho tsara kokoa. Tsy azontsika an-tsaina ny fiainana tsy misy azy ireo. '
Lisitry ny alika an-tendrombohitra Bernese mifangaro alika
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana Mountain View Cur Dog
Fampahalalana sy sary miteraka alika beabull
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Poochin
Parson Russell Terrier Dog fampahalalana momba ny fiompiana sy sary
Fampahalalana sy sary momba ny saka Ratsy Doxie Toy Ratsy
Saint Bernard Dog Breed Pictures, Pejy 3
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Hava-Apso
Fila Brasileiro Dog Fampahalalana sy sary
asehoy ahy ny sarin'ny bulldog amerikana
karazana famerenana labrador isan-karazany
mini aussie mainty sy fotsy
jack russell cairn terrier mix
amerikana bulldog mena orona pitbull mix